Ankazobe: taksiborosy maromaro voatafika, olona valo voasambotra | NewsMada
Ankazobe: taksiborosy maromaro voatafika, olona valo voasambotra
Par Taratra sur 13/08/2018
Nisehoana fanafihana taksiborosy indray tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra, teo Borikely Ankazobe, ny zoma hifoha asabotsy alina teo, tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany. Voaroba ny mpandeha, nisy ny naratra, kanefa aingam-piasa ny zandary ka nisy olona valo sahady no tratra.
Nisy poa-basy tamin’izany, ary nisy zaza naratra voan’ny piti-bala. Fiara maromaro no voasakana ka voaoroba daholo ny entana tany amin’ny mpandeha toy ny finday sns. Efa lasa ireo jiolahy, tsy fantatra mazava ny isany vao afaka niantso vonjy. Araka ny fanazavana avy any amin’ny zandarimaria, nisy ny fitondrana alika mpitsongodia tany Borikely taorian’ny fanafihana ka tratra tao amin’ity toerana ity ny lehilahy iray voalaza fa lehiben’ny mpanafika. Nisy olona fito hafa ihany koa nosamborina tamin’izany, ary ampolony karohina, izay efa fantatra daholo ny momba azy. Mbola tratra tany ny entana maromaro an’ireo mpandeha voaroba.
Araka ny fanazavana, avy any Maevatanana ireo fiara ireo, nisy zandary niaraka taminy ary nijanona teo Mahatsinjo ny rehetra. Tokony ho eo indray no hisy zandary avy amin’ny fiara avy aty Antananarivo mifindra ary miara-miverina amin’ireo taksiborosy. Voalaza anefa fa tsy nahandry ny zandary ireo fiara ireo fa nifampitarika fa efa maro ka tsy hisy sahy hanakana. Tsy izay anefa ny zava-niseho fa io nisy nanafika io. Toy ny nisy nampilaza ireo jiolahy fa tsy misy zandary amin’ireo fiara mandeha ireo.
Misy saofera mafy loha
Araka ny fanamarihana azo ihany, misy ireo saofera mafy loha mitondra ny fiara hatrany na efa tsy misy zandary manakana aza. Nanamafy ny zandary fa efa misy mpitandro filaminana tokony niaraka tamin’ireo fiara voatafika ireo. “Ny mpamily no nifampitarika fa mihevitra fa efa maro ka tsy hisy haninona. Mety misy ny mpanome vaovao ny jiolahy fa tsy misy zandary any anaty fiara any”, hoy ny fanazavana azo.
Nanomboka ny asabotsy teo, nanapa-kevitra ny zandary fa sakanana izay fiara mandeha alina ary tsy maintsy miandry maromaro ary misy zandary manaraka any vao mahazo mandeha. Andrasana izay vokatr’izay satria mahazo tsiny hatramin’ny mpitandro filaminana rehefa mitranga ny toe-draharaha tahaka izao.